ကပ်ဆေးခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “အဋ္ဌာနမေတံ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Religious ကပ်ဆေးခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “အဋ္ဌာနမေတံ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ
ဤဂါထာတော်သည်ကား…. ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို အရှင်ဒေဝဒတ် ကျောက်မောင်းဆင်၍လုပ်ကြံပြီးကာစ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တို့က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက်စိုးရိမ်ကြသဖြင့် တုတ် တောင်ဝှေး စသည်တို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုအကာအကွယ်ပေးရန်စုဝေးရောက်ရှိလာကြရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က ကာကွယ်ပေးရန်မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းမိန့်ကြားတော်မူရာတွင်တစ်ကြိမ်။ နောက်နေ့မြို့တွင်းသို့ဆွမ်းခံကြွမည့်အချိန် နာဠာဂီရိ ဆင်ဆိုးကြီးကို အရက်တိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို လုပ်ကြံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိတော်မူသဖြင့် ညီတော်အရှင်အာနန္ဒာက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ရှေ့မှ ကြွသွားပြီး ဘုရားရှင်ကိုအကာအကွယ်ပြုမည်ကို မလိုအပ်ကြောင်း အရှင်အာနန္ဒာအား မိန့်ကြားတော်မူရာတွင် တစ်ကြိမ်။ နှစ်ကြိမ်တိုင် “ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ သဘာဝ မည်သူကမျှ မည်သို့မျှ ဘုရားရှင်တို့၏ အသက်ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်၍ မရကြောင်း ဘုရားရှင်တို့သည် အချိန်တန်မှသာ မိမိတို့အလိုလိုသာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြရမြဲဖြစ်ကြောင်း” မိန့်ကြားတော်မူသော ဂါထာတော်ဖြစ်၏
“အဋ္ဌာန မေတံ ဘိက္ခဝေ အနဝကာသော၊ ယံ ပရူပက္ကမေန တထာဂတံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေယျ၊ အနုပက္ကမေန ဘိက္ခဝေ တထာဂတာ ပရိနိဗ္ဗာယန္တိ။” (ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေန သောတ္ထိမေ ဟောတုသဗ္ဗဒါ။) ဤဂါထာတော်၏ တန်ခိုးတော်သည် သက်တော်ရှည်စံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အိမ်ခြေတစ်ထောင်ကျော်ရှိသည့် စံကင်းရွာကြီး ပလိပ်ရောဂါကျရောက်နေ ရာ အကျဉ်းအကြပ်ထဲမှ ရွာသူရွာသားတို့၏ အသက်ဘေးအန္တရာယ်မှ ကယ်ဆယ်တော်မူခဲ့ရာတွင် ထင်ရှားတော်မူခဲ့၏။
(ယ္ခု မ ဟ န ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဒ္ဒန္တကုမာရ အရွယ်ကောင်းစဉ် ်ကလည်း စံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက ထိုအကြောင်းမိန့်ကြား၍ အဋ္ဌာနမေတံ ဂါ ထာတော်နှင့် လူသားတို့၏အသက်ကိုကယ်ခါ သာသနာပြုရာ ပြုကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ဖူး၏။) UBA ခေတ်က ရှမ်းပြည်တစ်နေရာတွင် တောင်စောင်းနှင့်တိုက်မိပြီးလေယာဉ်ပျက်ကျရာ အပွန်းအပဲ့ရာပင်မရှိ အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့သူ၏ အကျင်္ ီအိတ်အတွင်း၌လည်း အဋ္ဌာနမေတံဂါထာတော် ရေးထားသည့် စာရွက်ကိုတွေ့ရသည်ဟုဆို၏ ။ထိုသူတစ် ဦးထည်းသာ ထူြုခားစွာ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့၏။ “အဋ္ဌာန မေတံ” ဂါထာတော်ကို အချို့ကလည်း “သဗ္ဗသိဒ္ဓိ “ဂါထာတော်ဟု အမည်ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ မည်သို့ဆိုစေ “အဋ္ဌာန မေတံ”ဂါထာတော် ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခြင်း၊ ပုဒ် ပါဒ်အက္ခရာ မှန်ကန်စွာရေးသား၍အိမ်၏ ဘုရားကျောင်းဆောင် အိမ်၏ လေးဘက်လေးတန် အိမ်ဝင်ပေါက် အပေါ် စသည်တို့၌ရိုသေစွာ ကပ်ထားခြင်း။
မိမိ၏အိတ် ဦးထုပ် စသည်တို့၌ ရိုသေစွာ(ရိုသေစွာ) ဆောင်ထားခြင်း စသဖြင့် မိမိတို့ဉာဏ် ရှိသလို အကာအကွယ်ယူ ထားနိုင်ပါကြောင်း။ ထိုသို့ဂါထာတော်၏ အကာအကွယ်ကို ရိုသေ ယုံကြည်စွာယူထားခြင်းဖြင့် (ဝဋ်ကြွေးမှ မရှိလျှင်)လုံးဝ အန္တရာယ်ကင်းပါကြောင်း သူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျား။ (ကျွန်ပ််ကိုယ်တိုင်-“အဋ္ဌာန မေတံ”ဂါထာ တော်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် အသက်အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရပုံကို သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်တိုင် ကိုယ်တွေ့အဖြစ်မှန်ဝတ္ထုတိုများအဖြစ်ရေးသားခဲ့ပါ၏။)
ကပ္ေဆးျခင္းေဘးမွ လြတ္ကင္းၾကေစရန္ “အ႒ာနေမတံ” ဂါထာေတာ္ ႐ြတ္ပါ
ဤဂါထာေတာ္သည္ကား…. ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို အရွင္ေဒဝဒတ္ ေက်ာက္ေမာင္းဆင္၍လုပ္ႀကံၿပီးကာစ ပုထုဇဥ္ရဟန္းေတာ္တို႔က ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္အတြက္စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္ တုတ္ ေတာင္ေဝွး စသည္တို႔ျဖင့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကိုအကာအကြယ္ေပးရန္စုေဝးေရာက္ရွိလာၾကရာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကာကြယ္ေပးရန္မလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းမိန႔္ၾကားေတာ္မူရာတြင္တစ္ႀကိမ္။ ေနာက္ေန႔ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ဆြမ္းခံႂကြမည့္အခ်ိန္ နာဠာဂီရိ ဆင္ဆိုးႀကီးကို အရက္တိုက္ၿပီး ဗုဒၶဘုရားရွင္ကို လုပ္ႀကံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေတာ္မူသျဖင့္ ညီေတာ္အရွင္အာနႏၵာက ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ေရွ႕မွ ႂကြသြားၿပီး ဘုရားရွင္ကိုအကာအကြယ္ျပဳမည္ကို မလိုအပ္ေၾကာင္း အရွင္အာနႏၵာအား မိန႔္ၾကားေတာ္မူရာတြင္ တစ္ႀကိမ္။ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ “ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ သဘာဝ မည္သူကမွ် မည္သို႔မွ် ဘုရားရွင္တို႔၏ အသက္ကိုလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္၍ မရေၾကာင္း ဘုရားရွင္တို႔သည္ အခ်ိန္တန္မွသာ မိမိတို႔အလိုလိုသာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကရၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း” မိန႔္ၾကားေတာ္မူေသာ ဂါထာေတာ္ျဖစ္၏။
“အ႒ာန ေမတံ ဘိကၡေဝ အနဝကာေသာ၊ ယံ ပ႐ူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပယ်၊ အႏုပကၠေမန ဘိကၡေဝ တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏၲိ။” (ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိေမ ေဟာတုသဗၺဒါ။) ဤဂါထာေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ သက္ေတာ္ရွည္စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္ စံကင္း႐ြာႀကီး ပလိပ္ေရာဂါက်ေရာက္ေန ရာ အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲမွ ႐ြာသူ႐ြာသားတို႔၏ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္ဆယ္ေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ ထင္ရွားေတာ္မူခဲ့၏။
(ယ္ခု မ ဟ န ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာေတာ်ဘုရားကြီးဘဒ္ဒန္တကုမာရ အရွယ်ေကာင်းစဉ် ်ကလည်း စံကင်းဆရာေတာ်ဘုရားကြီးက ထိုအေကြာင်းမိန်႕ကြား၍ အဋ္ဌာနမေတံ ဂါ ထာေတာ်ႏွင်႕ လူသားတို႔၏အသက်ကိုကယ်ခါ သာသနာပြဳရာ ပြဳေကြာင်း မိန်႕ကြားေတာ်မူခဲ့ဖူး၏။) UBA ခေတ်က ရွမ်းပြည်တစ်နေရာတွင် ေတာင်ေစာင်းႏွင်႕တိုက်မိပြီးလေယာဉ်ပၾက်ကျရာ အပွန်းအပဲ့ရာပင်မရွိ အသက်ရွင် ကျႏ်ခဲ့သူ၏ အကျင်္ ီအိတ်အတွင်း၌လည်း အဋ္ဌာနမေတံဂါထာေတာ် ေရးထားသည်႕ စာရွက်ကိုေတွ႔ရသည်ဟုဆို၏ ။ထိုသူတစ် ဦးထည်းသာ ထူြဳခားစွာ အသက်ရွင်ကျႏ်ခဲ့၏။ “အဋ္ဌာန မေတံ” ဂါထာေတာ်ကို အၿခိဳ႕ကလည်း “သဗ္ဗသိဒ္ဓိ “ဂါထာေတာ်ဟု အမည်ေခါ်ေဝါ်ကြ၏။ မည်သို႔ဆိုေစ “အဋ္ဌာန မေတံ”ဂါထာေတာ် ကိုေန႔စဉ်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခြင်း၊ ပုဒ် ပါဒ်အက္ခရာ မွန်ကန်စွာေရးသား၍အိမ်၏ ဘုရားေၾကာင်းေဆာင် အိမ်၏ ေလးဘက်ေလးတန် အိမ်ဝင်ေပါက် အေပါ် စသည်တို႔၌႐ိုသေစွာ ကပ်ထားခြင်း။
မိမိ၏အိတ္ ဦးထုပ္ စသည္တို႔၌ ႐ိုေသစြာ(႐ိုေသစြာ) ေဆာင္ထားျခင္း စသျဖင့္ မိမိတို႔ဉာဏ္ ရွိသလို အကာအကြယ္ယူ ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း။ ထိုသို႔ဂါထာေတာ္၏ အကာအကြယ္ကို ႐ိုေသ ယုံၾကည္စြာယူထားျခင္းျဖင့္ (ဝဋ္ေႂကြးမွ မရွိလွ်င္)လုံးဝ အႏၲရာယ္ကင္းပါေၾကာင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔ခင္ဗ်ား။ (ကြၽန္ပ္္ကိုယ္တိုင္-“အ႒ာန ေမတံ”ဂါထာ ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရပုံကို သူရဇၨမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္မွန္ဝတၳဳတိုမ်ားအျဖစ္ေရးသားခဲ့ပါ၏။)
ေန႔စဥ္မျပတ္ ႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေတာ္ မူၾကပါ သူေတာ္ေကာင္းတို႔။ဦးေက်ာ္စိန္ဝင္း / ဉာဏိႏၵ-ေရနံေခ်ာင္း။
ပုံမှန်ဆိုရင် မေတ္တာသုတ် ကိုမနက် (၃)ခေါက် ည (၃)ခေါက် ပူဇော်ပါတယ်…ပုံမှန်ဆိုရင် မေတ္တာသုတ် ကိုမနက် (၃)ခေါက် ည (၃)ခေါက် ပူဇော်ပါတယ်…
ပုံမှန်ဆိုရင် မေတ္တာသုတ် ကိုမနက် (၃)ခေါက် ည (၃)ခေါက် ပူဇော်ပါတယ်… အခု အဓိဌာန်တခုအနေနဲ့ ရွတ်မယ့် မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံရွတ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို အားလုံးနဲ့အတူ ကုသိုလ်ယူ ပူဇော်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ.. ”မေတ္တာသုတ်ရွတ်ပုံ နည်းစနစ်” တနင်္ဂနွေဂြိုလ်သက် ၆ တနင်္လာဂြိုလ်သက် ...